7 ka mid ah xeebaha ugu fiican koonfurta Talyaaniga | Wararka Safarka
Susana Garcia | | Getaways Yurub, General, Italia, Xeebaha
Markay cimiladu wanaagsan tahay waxaan durbaba dareemeynaa sida xeebta, maaddaama kuwa aaggeenna horay loo yaqaanay, waxaan dooneynaa inaan ku riyoono xeebaha kale ee meelaha xiisaha leh. Sida oo kale 7 xeebood ee ugu fiican koonfurta Talyaaniga. Talyaaniga dhexdiisa ma jiri doonaan qurux qurux iyo xeebo asal ah, oo leh badda Mediterranean-ka xagga dambe iyo cimilo laqinbayo.
Xusuusnow xeebahaas, in kastoo aan hubno inay jiraan kuwo kale oo badan. Iyagu waa uun sanduuqyo caan ah oo la yaqaan, laakiin xeebta Talyaaniga jasiiradduna waxaa ka buuxa xeebo mudan in la lumiyo. Hada waxaan arki doonnaa darajada toddobo xeebood oo aan jeclaan laheyn inaan booqano maanta si aan ugu raaxeyno cimiladaas badda Mediterranean.
1 Scala dei Turchi ee Agrigento, Sicily
2 Marina Piccola gudaha Capri
3 Marina dell'Isola oo ku taal Tropea, Calabria
4 Spiaggia dei Conigli oo ku taal Lampedusa, Sicily
5 Cala Rossa oo ku taal jasiiradda Favignana, Sicily
6 Baia delle Zagare oo ku taal Gargano, Puglia
7 Cala Spinosa ee Santa Teresa Gallura, Sardinia
Scala dei Turchi ee Agrigento, Sicily
Waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan dhammaan, oo loo yaqaan kuwa buuraha dhaadheer ee ay duufaannada iyo dabayshu ku xardheen, kuwaas oo abuuray qaabab gaar ah, sida haddii ay jaranjarooyin ahaayeen Magacaaga, Jaranjarada Turkiga ' Waxay ka timid buurahaas iyo in meeshani ay ahayd meel ay ku magan galaan burcad badeedda Turkiga qarniyo ka hor. Waxay ku taal xeebta Realmonte, ee gobolka Agrigento. Waxay leedahay ciid wanaagsan iyo biyo nadiif ah oo lagu maydho, iyo nuuradda dhagaxa weyn ee fadhiisata ee buuraha ayaa ka dhigaysa inay iyagu leeyihiin midab cad oo qurux badan oo ka duwan badda. Hadda burcad-badeeddu gabaad uma sii galaan, laakiin waxaa xaqiiqo ah in ay mudan tahay in waqti lagu qaato in lagu qariyo xeebtaan, oo lagu jiifsado dhagxaanta ama ciidda.
Marina Piccola gudaha Capri
Markii aan ka hadleyno Capri waxaan xusuusan nahay in jasiiraddani ay ahayd magangalkii Pablo Neruda, laakiin sidoo kale kuwa waaweyn Xiddigaha Hollywood ee 50-meeyadii, oo ka helay janno ku habboon jasiiraddan yar. Markaa kama maqnaan karno safkeenna xeeb ku taal jasiiraddan quruxda badan, oo ah gabbaad ka soo horjeedka paparazzi ee loogu talagalay dadka caanka ah ee ka soo jeeda xilli kale. Maanta wali waa meel sharaf leh, in kastoo aysan u badnayn sidii tobanaan sano ka hor, laakiin wali waxay sii gudbisaa isla soo jiidashada. Marina Piccola waxay ku taal gobolka Campania. Bad yar oo laga ilaaliyo gidaar dhagax ah oo leh aragtiyo qarka dheer ee ku hor yaal xeebta. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu tago halkaas, laakiin midka ugu caansan iyo kan asalka ah waa Krupp, oo ah waddo jaranjarooyin ah.
Marina dell'Isola oo ku taal Tropea, Calabria
La Marina dell'Isola waxay u taagan tahay qaabkeeda dhagaxa weyn iyo inay tahay xeeb magaalo laakiin riyo. Gobolka Vibo Valentia, ee Tropea, Calabria, waa xeebtan weyn, oo ku taal inta u dhexeysa 'Isola Bella' iyo 'Playa de la Rotonda'. Waxay u taagan tahay dhagaxa weyn ee badda ku soo dhaca oo kala sooca xeebta, halkaasoo kaniisadda Santa María de la Isla, oo ah xarun duug ah oo Benedictine ah, oo ku taal. Isla waqtigaas oo aan ku raaxeysaneyno xeebta quruxda badan, waxaan ku raaxeysan karnaa magaalada Tropea, oo guryaheeda ay iska indha tirayaan buurta, iyo halka aan ka arki karno cathedralkeeda asalka Romanesque.
Spiaggia dei Conigli oo ku taal Lampedusa, Sicily
Tani waa 'Xeebta Bakaylaha' haddii aan ku turjunno magaciisa, Lampedusa. Waxay magaceeda ku leedahay jasiiradda ku taal horteeda, Isola dei Conigli, waxaana loo arkaa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan adduunka. Dabcan waa inay noqotaa maxaa yeelay waa goob bikro ah oo qurux badan, oo leh biyo cad oo cad. Waa in la dhaho si aad u gaarto meeshaas waa inaad xoogaa socod ku martaa wadada dhexdeeda oo xagaaga badanaa waa dad badan. Dhamaadka xagaaga xitaa waxaan arki karnaa qoolleyda aagga hadaan nasiib nahay.
Cala Rossa oo ku taal jasiiradda Favignana, Sicily
Cala Rossa kan ayaa iska leh keyd dabiici ah ee Aegades Islands, jasiiradda Favignana. Meel hal mar laga soo saaray soo saarista dhagaxa, oo hadda ah meel dalxiis loo dalxiis tago. Hadda waxay u taagan tahay biyaheeda nadiifka ah ee cajiibka ah, oo leh turquoise iyo codad buluug ah oo ku yaal aag aad u weyn oo lagu maydho ama lagu maydho. Muuqaalka dabiiciga ah ee ku xeeran halkaasoo aad ku tamashleyn karto iyo qaab dhismeedka dhagaxa ayaa dhameystiraya dalabkan xeebtaan xiisaha iyo quruxda badan leh.
Baia delle Zagare oo ku taal Gargano, Puglia
Waxay ku taal Beerta Qaranka Gargano waxaad ka heli doontaa baddan. Biyahan dhexdeeda dhowr waxyaalood ayaa ka muuqda, waana inay tahay goob dabiici ah oo qurux badan oo muuqaal duurjoog ah leh, taas oo, si kastaba ha noqotee, horeyba uga dalxiis badan tahay xilliyadii hore, waxayna leedahay dalladayaal xeebta iyo adeegyada qaarkood. Waxay u taagan tahay urta ubaxyada liinta iyo waliba dhagxaanta badda dhexdeeda, kuwaas oo ay sameysmeen nabaad-guurka biyaha iyo hawada, waana wax ina xusuusinaya xeebaha sida Las Catedrales ee Lugo, Spain.
Cala Spinosa ee Santa Teresa Gallura, Sardinia
Magaalada Madaxa Capo waxaad ka heli doontaa Cala Spinosa, xeeb ay gaaraan wadiiqooyin xoogaa yara yaacsan. Waxa ugu fiican ee ku saabsan damacan yar ayaa ah in qof walba uusan diyaar u ahayn inuu sameeyo dadaal si uu u gaaro, laakiin xaqiiqdii waa u qalantaa in lagu raaxeysto biyahaas nadiifka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » 7 ka mid ah xeebaha ugu fiican koonfurta Talyaaniga
10 dalxiis oo yurubiyan ah oo fasax ah